Pula na Croatia, mkpuru akụkọ ihe mere eme na nke ndi Rome | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Croacia, Ebe njegharị
Pula egwuregwu amọ egwuregwu
Pula na Croatia bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke Adriatic. Ihe dị ka puku mmadụ iri isii bi na ya, ọ bụ obodo kacha mkpa Istria na, na mgbakwunye na njem, ọ na-adị ndụ na-ewu ụgbọ mmiri, ịkụ azụ na ịemụ mmanya.
Ọ dịlarị mkpa dịka ebe nlekọta na Rome oge ochie. Ma mmalite ya efunahụ na akụkọ mgbe ochie. Ọ na-ekwu na ndị Colchids, ike gwụrụ ịchụ Jason na ndị Argonauts ya iji weghachite Golden Fleece, anwaghị anwa ịlaghachi n'ala ha na-enweghị isi. Ha biri na mpaghara a, guzobe Pula. N'ọnọdụ ọ bụla, obodo a nwere oke osimiri mara mma na ọtụtụ ihe ncheta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ya, anyị na-agba gị ume iso anyị.
1 Ga leta Pula na Croatia
1.1 Roman antitheater
1.3 Ọnụ Gatezọ Goldenmá Ọma
1.4 Ọnụ Gatezọ ercmá Hercules
1.5 Mgbidi na ọnụ ụzọ ámá ndị ọzọ nke obodo Pula na Croatia
1.7 Katidral nke Assumption nke Virgin Mary
1.8 Osimiri Pula na Croatia
2 Gastronomy nke Pula na Croatia
3 Kedu oge kacha mma iji gaa Pula
4 Otu esi aga Pula na Croatia
Ga leta Pula na Croatia
Otutu ihe nketa nke Pula bu nke ya Oge Roman. Ndị fọdụrụ e wuru fọrọ nke nta ka dum na ya n'oge ụdi na-achị na Republic of Venice gosipụtara n'obodo ahụ. Anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ụlọ ndị a.
Ọ bụ ebe a kacha mara amara na Pula na Croatia. E wuru ya na XNUMXst narị afọ AD na-eso canons nke Rome Coliseum, nke ọ dịkọrọ ndụ. O nwere atụmatụ elliptical nke nwere nnukwu isi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị mita na iri atọ n'ogologo. Na mpụga, ọ mejupụtara arches iri asaa na abụọ ma nwee ikike maka puku mmadụ iri abụọ.
Templelọ nke Augustus na obí eze
Ọ bụ ebe etiti Pula n'oge Rome, ma ọ bụ obodo ahụ ka bụ isi obodo taa. Enwere n'ime ya a temple a raara nye AugustusỌ bụ ezie na ọ bụghị nke mbụ, bọmbụ nke Agha Worldwa nke Abụọ bibiri ya. Ma na nwughari mosaics na iberibe nke onye ahụ gụnyere. E nwekwara ụlọ arụsị ndị ọzọ a raara nye Juno, Jupiter, na Minerva. Ugbua na Middle Ages na imposing forum e wuru obí eze, nke na-achikota ụdị dị ka Romanesque, Gothic na Renaissance. Taa, ọ nwere houseslọ Nzukọ Alaeze.
Ọnụ Gatezọ Goldenmá Ọma
A makwaara dị ka Arch nke Mmeri nke Sergios, E wuru ihe dị ka afọ XNUMX BC na ụdị ndị Kọrint siri ike nke ndị Hellenist nwere. N'aka nke ọzọ, n'otu n'ime okporo ámá ndị dị ya nso ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ mmanya.
Ọnụ Gatezọ ercmá Hercules
Akụ a ọzọ dị n'etiti abụọ turrets ochie. Ma ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe owuwu a bụ ihe ederede dị nso. N'ime ya a na-ekwu na Ala Lucio Calpurnio y Gaius Cassius bụ ndị Rome nyere ọrụ ka chọtara Pula. N'ihi ya, a marala na ọnọdụ a mere n'afọ iri anọ na asaa BC.
Mgbidi na ọnụ ụzọ ámá ndị ọzọ nke obodo Pula na Croatia
Ruo narị afọ nke iri na itoolu, mgbidi nwere ibo ụzọ dị iche iche gbara Pula gburugburu. Mana n’oge ahụ ọ dara iji kwado mgbasawanye nke obodo. Otú ọ dị, akụkụ ya ka na-echekwa, nke gafere site na oku Ejima ụzọ ruo mgbe Ogige Giardini.
Ọnụ ụzọ ámá ndị a na-enweta aha a n'ihi na ha bụ otu ụzọ abụọ yiri nke ahụ nyere obodo ochie ahụ ohere. Otu n'ime njem njem pụrụ iche na Pula na-amalite site na ha. Ọ bụ ihe gbasara veranda n'okpuruala nke na-aga ọtụtụ narị mita n'okpuru ala obodo ahụ. E gwupụtara ha n'oge ọchịchị Austro-Hungaria wee gbakọta na nnukwu ọnụ ụlọ dị n'okpuru ebe e wusiri ike Kastel.
Nke ndi Venice wuru iji chebe oke osimiri, ulo a wuru n’elu ugwu kachasi di na Pula. Ọ nwere atụmatụ kpakpando na ntọala anọ. A na-echekwa ya nke ọma ma ugbu a ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke Ihe ngosi ihe mgbe ochie nke Istria, ihe ngosi nke gosiputara ngbanwe nke mpaghara site na oge Rom rue ugbua site na udi ihe di iche iche.
N’otu ugwu ebe nnukwu ụlọ ahụ dị, ị ga-ahụ foduru a Roman nkiri na n'okpuru nke a ị ga-ahụ nnukwu ụlọ ngosi ihe nka ọzọ nke Pula: ihe ochie nke Istria.
Katidral nke Assumption nke Virgin Mary
Will ga-ahụ ya n’oge ochie site na Flavia, nke si na ebe a na-eme egwuregwu gaa ebe a na-eme egwuregwu na nke taa bụ otu n'ime okporo ụzọ Pula. Ọ bụ ụka Kraịst oge mbụ nke iwu ya sitere na narị afọ nke XNUMX. Otú ọ dị, façade ahụ sitere na narị afọ nke XNUMX ma na-azaghachi ụdị Renaissance, ebe ụlọ mgbịrịgba ya bụ Baroque.
Ọ bụghị naanị ụlọ nsọ ahụ ị nwere ike ịhụ n'obodo ahụ. Na chọọchị orthodox nke St. Nicholas E wuru ya na XNUMX narị afọ, ọ bụ ezie na e wughachiri ya na XNUMX. N'otu oge ahụ bụ nke Lọ uka nke Santa María Formosa. N'ikpeazụ, chọọchị na ebe obibi ndị mọnk nke San Francisco Ha sitere na XIV ma zaghachi na mbubreyo Romanesque.
Osimiri Pula na Croatia
Ma, ọ bụrụ na Adriatic n'ụsọ oké osimiri guzo maka ihe, ọ bụ maka ọmarịcha osimiri ya. Naanị kilomita iri site na Pula ị nwere Ogige Kamenjak Nature, na Premantura peninshula. N'ime ya ị ga - ahụ osimiri mara mma dịka nke Polyje, Pinizule, Njive o Ntughari, ha niile nwere mmiri doro anya dị na gburugburu ebe obibi mara mma.
Gastronomy nke Pula na Croatia
Nri Pula bụ nke ezi uche dị na ụdị ahụ Mediterenian mana o nwere ike Mmetụta Austrian n’ihi ọtụtụ afọ nke obodo a nye nke ala-eze nke a. Na mpaghara e nwere ezigbo nri: na ọcha truffle. Na-esote ya, na sausagesnke azu na azu, na ezi wine.
N'ime ndị bu ụzọ, ndị kulen, nke ejiri akụkụ kachasị mma nke anụ ezi, nnu, galik na paprika mee. Ha bụkwa efere ọdịnala cevapi, nke e ji osikapa na yabasị mee soseji; ihe pasta, stew nke anụ ehi na akwụkwọ nri nwere mmanya, ma ọ bụ ihu burek, ụdị ụdị empanad na-ejikarị chiiz.
Banyere dessers, ndị achicha macarana, nke a na-eji àkwá, almọnd na cherị mmanya na-aba n'anya. Na kwa atrukli, ụfọdụ pasta na-apụta nke akwa, cheese na ude jupụtara; ihe orehnjaca, ukpa puff achịcha dị iche iche na Apple strudel. N'ikpeazụ, i nwere ike imecha nri gị na otu iko nke ahụkarị mmanya na mpaghara: na biska.
Kedu oge kacha mma iji gaa Pula
Oge kacha mma iji gaa na obodo Croatian bụ ndaeyo site na ihu igwe. Agbanyeghị, ọ bụkwa oge ọ na-anata ọtụtụ ndị njem na ikekwe nke a karịrị gị ike. Ya mere, anyị na-akwado ka ị banye primavera. Ihu igwe na-adị ka nke ọma n’oge ọkọchị ma ndị ọbịa anaghị eju ebe ahụ.
Otu esi aga Pula na Croatia
Iji ruo Pula, ị nwere ọtụtụ nhọrọ. I nwere ike ime ya n’okporo ụzọ, ma ọ bụ njem na-agwụ ike. Ọ bụrụ na ị mee njem gị n'oge dị elu, enwere ụgbọ elu si Madrid na Barcelona elu Kewaa, Zagreb y Dubrovnik. Mgbe ahụ ị ga-aga n'okporo ụzọ gaa obodo.
Agbanyeghị, n'oge obere oge, ụgbọ elu anaghị adịkarị na mpaghara Croatia. Yabụ, ọ bụrụ n ’ịga n’oge a, ọ kacha mma ka ị fee Venice ma lee ebe ị na-aga a ugbo mmiri ka Pula n'onwe ya.
Na mmechi, Pula na Croatia bụ a ebube njem nleta. Ọ na-enye gị ọmarịcha osimiri, nnukwu ihe nketa na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ụdị nri Mediterranean. Chọghi ihu ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Pula na Croatia